Mmekọahụ n'okpuru Iwu England, Wales na Northern Ireland - wardlọ Nkwụghachi
Home Mmekọahụ n'okpuru Iwu England, Wales na Northern Ireland
“Mmekọahụ” abụghị usoro iwu, kama ọ bụ nke ndị agụmakwụkwọ na ndị nta akụkọ ji ya. Agbanyeghị, ọ nwere ike nwee nrụpụta iwu siri ike maka ndị na-etinye ya, ọkachasị ụmụaka, ndị na-ahụ ya ka ịchụ nwoke na-enweghị mmerụ ahụ. Ndị uwe ojii nwere ha ọtụtụ ụkpụrụ iwu mpụ ndị ha ga-eji bo onye dara iwu ebubo. Lee eserese dị n’elu maka atụ ole na ole. Research egosiputa na ikiri ihe ndi na-akpali agụụ mmekọahụ mgbe niile na-akwado inwe mmekọahụ na ịkpa aghara, ọkachasị na ụmụ nwoke.
N’agbata afọ 2016 na afọ 2019, ndị uwe ojii nyochachara ihe karịrị ụmụaka 6,000 ndị na-erubeghị afọ 14 maka mmejọ mmebi mmekọahụ, gụnyere ihe karịrị narị afọ atọ nke ụlọ akwụkwọ praịmarị. Nke a isiokwu n'akwụkwọ akụkọ Guardian kọwapụtara ụfọdụ okwu.
Iwu Nkwukọrịta 2003 metụtara UK dum. Agbanyeghị mmejọ ndị ọzọ metụtara sexting ga-aga n'okpuru iwu dị iche iche na England, Wales na Northern Ireland na Scotland. Ducingmalite, inwe ma kesaa ihe osise ụmụaka (ndị na-erubeghị afọ 18) na nkwenye ha, ma ọ bụ na enweghị nkwenye ha, bụ ihe iwu megidere n'iwu. Lee n’elu maka iwu usoro iwu gbasara arụmọrụ na-ejikarị.
Inwe ma ọ bụ ichikota foto ma ọ bụ vidiyo na ekwentị ma ọ bụ kọmputa
Ọ bụrụ na gị, ma ọ bụ onye ị maara, nwere foto ọ bụla na-adịghị mma ma ọ bụ vidiyo nke onye na-erubeghị afọ 18, ọ ga-enwerịrị imezu ihe osise nke nwatakịrị ọbụlagodi na ha bụ otu afọ. Nke a megidere ngalaba 160 nke Iwu ikpe ikpe omekome 1988 na ngalaba 1 nke Nchedo Ụmụaka Na-eme 1978. Ọrụ ndị omekome na-ekpe ikpe ga-aga n'ihu ikpe na ikpe ebe ha chere na ọ bụ maka ọhaneze ime ya. Ha ga-eburu n'uche afọ na ọdịdị nke mmekọrịta nke ndị ahụ metụtara. Ọ bụrụ na ezigara ihe oyiyi na ntanetị na-enweghị nkwenye na ebumnuche iji wedaa ma ọ bụ kpatara nsogbu, a na-ewere ya dị ka 'ịbọ ọbọ porn' na a ga-ebo ya ebubo n'okpuru Iwu Mpụ Ikpe Ziri Ezi II Nkebi 2015. Lee Ebe a maka ntuzi aka nke ikpe na England na Wales.
Na-eziga foto foto ma ọ bụ vidiyo
Ọ bụrụ na nwa gị na-erubeghị afọ 18 ma ọ bụ ziga, bulite ma ọ bụ zipu onyonyo na-adịghị mma ma ọ bụ vidiyo na ndị enyi ma ọ bụ enyi nwoke / enyi nwanyị, nke a ga-emebikwa iwu nke 1 nke Nchedo ofmụaka 1978 ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ha bụ foto ya ma ọ bụ onwe ya, omume dị otú a mejupụtara 'ikesa' ụmụaka na-adịghị mma.
Nke a bụ ihe magburu onwe ya Nzọụkwụ site na Nzọụkwụ Nduzi na Mmekọahụ site na Youth Justice Legal Center. Dị ka nke a Akwụkwọ kọleji nke ndị uwe ojii, “Ntorobịa mepụtara onyonyo mmekọahụ sitere na nnabata nkwekorita na irigbu mmadụ. Inwe mmekorita nwoke na nwanyi n’edighi ya nwere ike adighi adota ndi uwe ojii. Nnyocha omempụ na ikpe maka mmejọ onyonyo edepụtara na nkowa a ga-adaba na ọnụnọ nke mmebi iwu dị ka nrigbu, mmanye, ebumnobi uru ma ọ bụ ndị okenye dị ka ndị na-eme mpụ dịka ndị a ga-abụ Mmekọahụ Mmekọahụ (CSA).
Ewu maka oru
Ezigbo nchegbu bụ na ọbụna ndị uwe ojii na-agba ajụjụ ọnụ ga-eme ka edebanye aha onye ntorobịa na ọdụ nchekwa data nke ndị uwe ojii. Eziokwu a nwere ike ịpụta na ndenye ego na - arụ ọrụ n'oge ọzọ ma ọ bụrụ na ọ dị onye ahụ mkpa itinye akwụkwọ maka igosipụta ya. Ọ ga-egosi maka nyocha maka ọrụ afọ ofufo na ndị na - enweghị enyemaka, ụmụaka ma ọ bụ ndị agadi.
Ingdọ aka na ntị ndị nne na nna!
Ndị uwe ojii Kent ekwuola na ha na-atụle odori nne na nna dị ka onye ọrụ dịịrị ya na nkwekọrịta maka smartphone nke zitere foto na-ezighi ezi / video.